८.३१ अंक बढ्यो नेप्से परिसूचक (२ बजेको अपडेट)
कात्तिक ६, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार नेप्से कारोवार भएको तेस्रो घण्टामा ८ दशमलव ३१ अंक बढेर १ हजार ६०६ दशमलव ३१ विन्दुमा पुगेको छ ।
उक्त अवधिसम्मको कारोवार अवधिमा १८४ ओटा कम्पनीको २२ हजार २४४ पटकको कारोबारमा ४३ लाख ३० हजार ९०९ कित्ता शेयरको रू. १ अर्ब ३५ करोड भन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री भएको छ । यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स १ दशमलव ९० अंक बढेर ३१८ दशमलव ५५ विन्दुमा पुगेको छ ।
बिहीवारको बजारमा तेस्रो घण्टासम्म कारोबारमा आएका १२ ओटा समुहमध्ये ५ ओटा समुहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी ७ ओटा समुहको परिसूचक बढेको छ । घट्नेहरुमा होटल, जलविद्युत्, ‘अन्य’, जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड समुह रहेको छ ।
उक्त अवधिसम्म बैंकिङ र वित्त समुहको परिसूचक सर्वाधिक १ दशमलव शून्य २ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त अवधिसम्म आव २०७६/ ७७ को मुनाफाबाट कुल १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको कुमारी बैंकको सर्वाधिक बढी रू. ११ करोड ३८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
कारोवारको सोही अवधिसम्ममा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको शेयरमूल्य सर्वाधिक ९ दशमलव ८९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कम्पनीको प्रतिकित्ता शेयर रू. ५८९ मा कारोबार भइरहेको छ भने नेपाल फाइनान्सको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १८ दशमलव ६७ ले बढेर रू. २०८ मा कारोबार भइरहेको छ ।
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले गर्‍यो १०.५२ % लाभांश प्रस्ताव [२०७७ मंसिर, ११]
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको मूल्य समायोजन [२०७७ मंसिर, ११]
६४ अंक बढेर नेप्से १८७४.८१ विन्दुमा, ६ अर्ब ८१ करोड ७७ लाखभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री[२०७७ मंसिर, १०]
२४.२४ अंकले बढ्यो नेप्से, एनएमबि माइक्रोफाइनान्सको शेयरमूल्य १०%ले वृद्धि (१२ बजेको अपडेट)[२०७७ मंसिर, १०]
फोक्सिङ्टारमा पुनः अस्थायी बेलिब्रिज जडानको काम शुरु
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले गर्‍यो १०.५२ % लाभांश प्रस्ताव